कसरी एक असीम कुकुरको ख्याल गर्ने विश्व कुकुरहरु
कसरी मातृभावीको बच्चाको लागि हेरचाह गर्ने
लुर्ड्स सरमिआन्टो | | कुकुरहरू
सामान्यतया, एउटा कुकुरले आफ्ना साना बच्चाहरूलाई माया र कोमलताका साथ हेरविचार गर्दछ, तर कहिलेकाँही कुरा राम्रो हुँदैन र बच्चाहरू टुहुरा हुन्छन्। जब त्यो हुन्छ, व्यक्ति जसले तिनीहरूलाई बचाउँदछ उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सबै हेरचाह प्रदान गर्नुपर्दछ यो कमजोर अवस्थामा।
यो कडा परिश्रम हो, तर यो यति लायक छ। यदि तपाइँ मां बिना पिल्लाको कसरी हेरचाह गर्ने जान्न चाहानुहुन्छ भने, मुन्डो पेरोजमा हामी तपाईंलाई आवश्यक जानकारी प्रदान गर्नेछौं।
1 दिनदेखि months महिना सम्म कुकुरलाई कसरी आमा गर्ने?
1.1 यसलाई आरामदायक र न्यानो ठाउँमा राख्नुहोस्
1.2 उसलाई हरेक २- hours घण्टा खुवाउनुहोस्
1.3 सफा राख
1.4 बोतल र निपल्स निर्जीव गर्नुहोस्
1.5 आन्तरिक र बाह्य परजीवीहरूको बिरूद्ध सुरक्षा गर्नुहोस्
2 के गर्ने जब कुकुरलाई आमाले अस्वीकार गर्दछ
2.1 कसरी बच्चालाई खुवाउने? यदि यसमा आमा छैन भने?
2.1.1 कसरी पिल्पीहरूका लागि दूध बनाउन?
2.2 नवजात पल्पीहरू कसरी सफा गर्ने र तिनीहरूलाई यो कसरी गर्ने सिकाउने?
3 कुकुरलाई बच्चाविना आमाले लिन सक्ने रोगहरू के हुन्?
3.7 क्यानाइन डिस्टेम्पर
4 के कारणहरू छन् जुन एउटा कुकुरलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ?
दिनदेखि months महिना सम्म कुकुरलाई कसरी आमा गर्ने?
यसलाई आरामदायक र न्यानो ठाउँमा राख्नुहोस्
बेडसोर डग बेड ...
नवजात शिशुहरू आफ्ना शरीरको तापक्रमलाई नियमित गर्न असमर्थ हुन्छन् र हाम्रो यो महसुस नगरीकन हाइपोथर्मिक हुन सक्छ। यसलाई रोक्नको लागि, कुकुरहरूका लागि ओछ्यानमा वा प्यारोमा राख्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, कुनै कोठामा ड्राफ्ट नभएको ठाउँमा राख्नुहोस्।
यदि त्यो समयमा हामीसँग कुनै छैन भने हामी एउटा प्लास्टिकको बक्स प्रयोग गर्न सक्दछौं जहाँ हामी कम्बलहरू राख्छौं। थप रूपमा, र विशेष गरी यदि यो शरद winterतु हो, तपाईंले उनीहरूको नजीक थर्मल बोतल हाल्नु पर्छ लुगामा बुर्काइन्छ ताकि तिनीहरू जलाउँदैनन्।
उसलाई हरेक २- hours घण्टा खुवाउनुहोस्
त्यसोभए तिनीहरू राम्ररी बढ्न सक्दछन् तपाईंले तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन दुध दिनु पर्छ कि हामी पशु चिकित्सा क्लिनिकमा र बोतलमा पाल्तु जनावर पसलहरूमा बिक्रीको लागि फेला पार्नेछौं।
तपाईंले तिनीहरूलाई गाईको दुध दिनु हुँदैन किनभने यसले तिनीहरूलाई नराम्रो महसुस गराउन सक्छ। फ्रिक्वेन्सी सामान्यतया प्रत्येक २ घण्टामा हुनेछ, तर यदि हामीले उनीहरूलाइ रातको समयमा सुतिरहेको देख्यौं भने हामीले उनीहरूलाई उठाउनु हुँदैन।
कुकुरहरुलाई अनुहार तल राख्नु पर्छ, कि, तिनीहरूको खुट्टा मा राख्नुहोस्। यस तरिकाले घाउको कुनै जोखिम हुनेछैन।
खाइसकेपछि, उनीहरूको मुख सफा गर्नुहोस् र एनो-जननांग क्षेत्रलाई एक कपडा वा कपासमा न्यानो पानीले ओगटेको उत्तेजित गर्नुहोस्, प्रत्येक चीजको लागि एक प्रयोग गरेर (मुख, मूत्र र मल)।
यदि हामीले देख्यौं कि उनीहरूलाई दिसा गर्न मुश्किल छ, हामी तिनीहरूलाई गोलाकार मसाज, घडीको दिशा दिनेछौं। खाएको दश मिनेट पछि पेटमा। पछि, हामी तिनीहरूलाई फेरि उत्तेजित गर्दछौं।
बोतल र निपल्स निर्जीव गर्नुहोस्
संक्रमण रोक्नको लागि यो गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। बच्चा आइटमका लागि डिजाइन गरिएको कीटाणुनाशक उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुहोस् वा bien एक भाप स्टेरिलाइजर। अर्को विकल्प पानीको भाँडोमा उमालेर ल्याउनु हो।
आन्तरिक र बाह्य परजीवीहरूको बिरूद्ध सुरक्षा गर्नुहोस्
दुई हप्ताको उमेरमा तिनीहरूलाई सिरप दिन राम्रो समय हुन्छ जुन उनीहरूले पाएको कुनै आन्तरिक परजीवीलाई हटाउँछ। यदि तपाईं स्पेनमा हुनुहुन्छ भने, पशु चिकित्सकले उनीहरूलाई सिफारिस गर्नेछ El दिनको लागि Telmin Unidia, र १ 15 दिन पछि उपचार दोहोर्याउनुहोस्।
Para भाँडा, टिक र अन्य बाह्य परजीवीहरू, तपाईंले छ हप्ता सम्म कुर्नुपर्दैन, कुन समयमा उनीहरूको पहिलो खोपहरू लिने समय हुनेछ।
के गर्ने जब कुकुरलाई आमाले अस्वीकार गर्दछ
जब यो हुन्छ तपाई सावधान हुनु हुँदैन, र तपाईले गर्न सक्ने उत्तम कुरा भनेको पशु चिकित्सा पेशागत व्यक्तिमा जानु हो, स्थिति को सामान्य समीक्षा गर्न को लागी, कुकुरको विस्तृत रूपमा समीक्षा। यसको मतलब यो होइन कि यो विशिष्ट छ कि यसले कुकुरहरूलाई स्वीकार गर्दछ, त्यसैले तिनीहरूको विकास पनि तपाईंमा निर्भर हुन सक्छ।
कसरी बच्चालाई खुवाउने? यदि यसमा आमा छैन भने?
तपाईंले कुकुरहरु को लागी एक सही वातावरण सृजना गर्न को लागी एक ठाउँ मा बस्न को लागी उनीहरुको आमाले दिन्छ। तातो वा तातो ठाउँ खोज्नुहोस्।
यस समयमा यो आवश्यक हुनेछ दिनको3घण्टा, २ hours घण्टा यो विशेष तयारी संग उनीहरुलाई खुवाउनुहोस्किनभने उसलाई तत्काल यसको आवश्यकता छ, किनकि उसको शुरुको दिनमा आमाको दुध धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
कसरी पिल्पीहरूका लागि दूध बनाउन?
स्टोर र पशु चिकित्सकहरूमा तपाईं केहि पाउडरहरू पाउन सक्नुहुन्छ जुन तातो पानीमा विघटन हुन्छ र एक प्याकेज जिसमें विशेष गरी अवस्थाको लागि तयार पारिएको बोतल पनि आउँदछ। हामीले पानी उमाल्नु पर्छ र त्यसपछि मात्र त्यस पानीमा यस पाउडरको संकेत मात्रा हिलाउनु पर्छ।
नवजात पल्पीहरू कसरी सफा गर्ने र तिनीहरूलाई यो कसरी गर्ने सिकाउने?
नवजात पल्पीहरू सफा गर्न तपाईं अधिक पानीबाट टाढा रहनु पर्छ र यो पहिलो चरणमा साबुन पनि। सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको फोहोर हटाउनु र यसलाई फेरि सुक्का बनाउनु हो। केहि अवस्थाहरूमा, भिजेको कपडा पनि प्रयोग हुन्छ, कुनै पनि प्रकारको रासायनिक उत्पादनहरू बिना।
उत्तेजित ताकि उनीहरूले पिसाब गर्न र दिसा गर्न सक्ने धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूले यो आफै गर्न सक्दैनन्, यसकारण तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न आफ्नो पेट मालिश गर्न पर्छ। यो कमसेकम तब सम्म गरिनु पर्छ जबसम्म उसले खानेकुरा सिध्याएन।
कुकुरलाई बच्चाविना आमाले लिन सक्ने रोगहरू के हुन्?
सामान्यतया, पशु बिमारीको बारेमा कुरा गर्दा, केवल ती भाइरल, धेरै सामान्य र घरपालुवा जनावरहरूको सामान्यतया ध्यानमा लिइन्छ, तर यो ज्ञात छ कि वर्तमान समयमा कुकुरहरु लाई अन्य प्रकारका रोगहरु संग पशुचिकित्सकहरु को लागी जान्छ कि सामान्यतया यी जनावरहरुलाई उनीहरुको जन्म बाट बढी प्रभाव पार्छ। पहिलो महिनामा।
यसैले तल हामी तपाईंलाई सबै प्रकारका रोगहरू देखाउनेछौं जुन तपाईंको कुकुरले संकुचन गर्न सक्दछ जब तपाईं आफ्नो जीवनको पहिलो भाग को माध्यम बाट जाँदै हुनुहुन्छ:
यदि तपाईंको पिल्ला लक्षणको रूपमा निरन्तर पखाला हुन्छनिश्चित रूपले तपाईको समस्या यो Giardiasis भनिने प्रोटोजोआनसँग गर्नुपर्दछ। यो केसहरूको संख्या बढ्दोमा फेला पर्दछ र यसको संक्रामक महान् संक्रामक शक्तिको सिटरको समावेशीकरण मार्फत हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार संकुचन एकदम छिटो छ र यो कुरा थाहा छ कि प्रायजसो pp० प्रतिशत पल्पीहरूसँग यो हुन्छ, केवल केही अवस्थामा तिनीहरूमा कुनै पनि प्रकारका लक्षणहरू देखा पर्दैन, जबकि अरूमा, त्यहाँ पखालासँग सम्बन्धित असुविधा हुन्छन्।
समस्या आफैंमा पर्छ पाचन प्रणाली द्वारा भोजनको न्यून शोषणमा, केहि चीज जुन यो क्रॉनिक रूपमा भयो भने कुकुरको ठूलो कमजोरी हुन सक्छ।
पनि भनिन्छ demodectic mange, यी परजीवीहरू हुन् जसले सूजन निम्त्याउँछन् र यो माइट्समा एक असंगत वृद्धिको कारणले भएको हो। यसले पिल्लालाई असुविधाहरू ल्याउन सक्छ, जस्तै ब्याक्टेरियोलोजिकल प्रकृति र फुरुनकुलोसिसका विभिन्न प्रकारका संक्रामक रोगहरू।
कुकुरको कोट ओभरपापुलेटि up्गमा अन्त्य हुने माइट डिमोडेक्स क्यानिस हो, जुन प्राय: सबै कुकुरहरुमा नियमित रूपमा पाइन्छ, तर सानो जनसंख्यामा यसले असर गर्दैन।
हामीले एउटा कारण उल्लेख गर्नु अघि तपाईंको कुकुरले पखालामा पखाला लक्षण देखाउन सक्छ, तर त्यहाँ अर्को पनि छ, जसले पशु चिकित्सा संसारमा धेरै केसहरू पनि देखाउँदछ। Coccidiosis को मामला मा, पखाला अझ बढी पानी हुनेछ र रगत दाग हुन सक्छया त कहिलेकाँही वा अधिक बारम्बार।
यसको एउटा रूप छ जुन धेरै खतरनाक र हानिकारक छ, जुन क्रिस्टोस्पोरिडियम एजेन्टको कारणले हुन्छ, जसले आंत म्यूकोसालाई सामान्यतया ठूलो चोट पुर्‍याउँछ। यसले कुकुरलाई ग्यास्ट्रिक जटिलतामा पुर्‍याउन सक्छ जसको लागि यसलाई पुनःहाइड्रेसन प्रक्रिया सुरु गर्न सजिलो हुन्छ।
यी परजीवीहरू हाम्रा साना जनावरहरूको जीवहरूको ठूलो शत्रु हो। यी मध्ये सब भन्दा प्रभावकारी यसको मापन हो, जो लगभग १० सेन्टिमिटर लामो सम्म पुग्न सक्छ, कुकुरहरु को शरीर को लागी केहि विवादास्पद।
जब एस्केरियासिसको तस्वीर हाम्रो पिल्लामा देखा पर्दछ, यो toxacara leonina वा toxacara canis द्वारा हुन्छ, र अत्यधिक रकममा यसको उपस्थिति खाना प्रशोधन गर्न असमर्थताको एक उच्च स्तर निम्त्याउँछ पाचन प्रणाली द्वारा।
यी toxacaras को प्रसारण धेरै माने मा हुन सक्छ, कुकुराहरु को लागी उनीहरु प्लेसेन्टा को माध्यम बाट संकुचन गर्न सक्छ मा, यसको आमा द्वारा र स्तनपान प्रक्रियामा पनि।
एक महिना पुराना पिल्पीहरूमा यसले पेटमा गम्भीर दुखाइ ल्याउन सक्छ र वयस्कताको समयमा कुकुरहरूले पार्कमा छरिएका अण्डाबाट संकुचन गर्न सम्भव छ।
यसको नामले सts्केत गर्दछ, त्यहाँ चाइलेटिल्ला नामको माइट छ र यो एक विशेषताको रूपमा ठूलो आकारको छ, त्यसैले यो कहिलेकाँही "वाकिdडन्ड्रफ" पनि भनिन्छ।
एउटा रोग जुन आफैंबाट पनि सार्न सकिन्छ, किनभने मानवका लागि पनि संक्रामक विशेषताहरू देखाउँदछ र धेरै केसहरू ज्ञात छन् जसमा परजीवी यसको मालिकहरूमा पहिलो पटक फेला पर्‍यो।
ती मध्ये एउटा विषाणुजन्य रोग जुन पालतु पशुहरूको संसारमा सबैभन्दा बढी परिचित छ, किनकि यो लामो समयदेखि पशु चिकित्सकहरूको लागि ल्याइएको सबैभन्दा चुनौतीहरू मध्ये एक थियो।
यो समयको साथ परिवर्तन भयो र आज त्यहाँ यति धेरै घटनाहरू छैनन् parvovirus जस्तो कि अन्य समयमा भएको थियो। यो एक रोग हो जुन आज कुकुरहरूको संख्यामा अधिक छैन जसमा खोप छैन।
भाइरसको जनावरहरूको लागि एकदम प्रतिकूल विकास भएको थियो बिभिन्न पिल्पीहरूमा भाइरसका नमूनाहरू बिभिन्न प्रकारका हुन्छन्, बाँच्नको लागि उत्परिवर्तनको उत्पादन।
सब भन्दा गम्भीर रोग मध्ये एक, जुन केहि केसहरुमा घातक हुन सक्छ, हो canine distemper। यो कुकुरको शरीरको भाग संख्याको कारण यो आक्रमण गर्न सक्छ। यो एक संक्रमणको उच्च डिग्रीको साथ एक रोग हो, र यसले धेरै अरूको माझमा जठरांत्र, श्वासप्रश्वास, नेत्र र urogenital समस्याहरू ल्याउन सक्छ।
भाइरस हावाको माध्यमबाट पिल्लाको शरीरमा प्रवेश गर्दछ, लिम्फ नोडहरूमा पनि पुग्छ, जहाँ यसले पुनरुत्पादित गर्छ श्वासप्रणालीको प्रसारमा। माध्यमिक जीवाणु रोग यसको प्रमुख कारण हो।
के कारणहरू छन् जुन एउटा कुकुरलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ?
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन एक वा बढी पल्पीहरू अस्वीकृत हुन सक्छन् र ती मध्ये ती हुन सक्छ आमा धेरै कलिलो छिन र एकदमै चाँडो छ, किनभने तिनीहरू आवश्यक मात्रामा दुध उत्पादन गर्न सक्दैनन्; जसको स्वास्थ्य समस्याहरू छन् जुन बच्चाको जन्मले ल्याएको हो; सामाजिक समस्या र तनाव।
हामी आशा गर्दछौं कि यो तपाईंको लागि उपयोगी छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » कुकुरहरू » कसरी मातृभावीको बच्चाको लागि हेरचाह गर्ने
इलिसा ZERPA भन्यो
मसँग २ 27-दिनको बच्चाको पिल्ला छ, आमाले उनलाई छोडिदिइन् र उनीहरूले दुध यता बेच्दैनन, त्यहाँ केवल गाईको दुध छ, मैले यसलाई हाइड्रेट गरेको रूपमा, म यसलाई अत्यन्त कमजोर देख्छु।
ELISA ZERPA लाई जवाफ दिनुहोस्
एना प्याटन भन्यो
मसँग १ महिना १२ दिनको कुकुर छ ... राती उनी थोरै रोइरहेकी छिन् मसँग एउटा ओछ्यान छ र जनावरहरु भरिएको छ। र खाना को विषय मा, दूध चाहँदैनन् उनी मात्र पातलो कटाई टर्की स्तन र पिल्लाहरु को लागी पेट चाहान्छन्, कि यस्तो सानो कुकुर को लागी ठीक हुनेछ? र पानी .. एक दिन मा कती पटक यो दिन्छु
Ana Paton लाई जवाफ दिनुहोस्
कुकुरहरूमा सुनेको असाधारण भावना